Trump oo ciidammo milateri ah u diraya xadka Mexico - BBC News Somali
Trump oo ciidammo milateri ah u diraya xadka Mexico
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu wacad ku maray in xadka koonfureed ee waddankaasi uu la wadaago Mexico uu u dirayo ciidammo milateri ah si ay xadkaasi u ilaaliyaan.
"Qaab milateri ayaannu arrintan wax uga qabanaynaa," ayuu Mr Trump Talaadadii ka sheegay Aqalka Cad, waxa uuna intaasi ku daray inay taasi noqon doonto "tallaabo weyn".
Goor sii horreysay Mr Trump ayaa waxa uu ku goodiyay inuu jarayo gargaarka uu Mareykanka siiyo Honduras, xilli lagu soo warramayo in koox dad ah oo magangalyo doon ah ay ku sii wajahan yihiin Mareykanka.
Labadii Madaxweyne ee ka horreysay Mr Trump ayaa waxa ay ciidammada ilaalada Qaranka xuduudda Mexico si ay gacan u gaystaan ilaalinta xuduudda Mareykanka.
Madaxweyne Barack Obama ayaa ilaa 1,200 oo askari si ay u ilaaliyaan xuduudda, halka Madaxweyne George W Bush ayaa isna waxa uu xuduudda u daadgureeyay 6,000 oo askari si ay gacan u siiyaan Ilaalada Xuduudda.
Mar uu Talaadadii la qadaynayay hogaamiyayaasha wadammada Baltic-ga, ayuu Mr Trump u sheegay weriyayaasha in Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Waqooyiga Ameerika uu khatar ku jiro haddii Mexico aanay joojin qulqulka muhaajiriinta.
Muuqaal, Dacwad dil oo argagax ka abuurtay dalka Ruushka
TOOS Ciidamada Tigray 'oo soo riday diyaarad dagaal'
Sidee ayuu geedkan bardaha ah uga guuleystay madaxweyne?
Dowladda Soomaaliya oo eriday safiirkii Kenya una yeertay safiirkeeda
Kenya: Ninkii loo heystay weerarkii Jaamacadda Garissa oo xabsi isku dhex dilay